Dada sy Rajoelina : Tsy mbola misy ny fifanarahana eo amin’izy ireo | Ny Valosoa Vaovao
Dada sy Rajoelina : Tsy mbola misy ny fifanarahana eo amin’izy ireo
par gvalosoa | Jan 11, 2018 | Edito | 2 commentaires
Mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena ny resaky ny minisitry ny fitsaràna Rasolo Elise Alexandrine ny talata teo nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety fa ampiharina amin’ny filoha Marc Ravalomanana ny sazy nandidian’ny fitsaràna azy, fitsaràna mahefa hoy izy no nitsara azy. Dia gaga ny rehetra raha naheno ny resak’ity tompon’andraikitra ambonin’ny fitsaràna ity, ny mpanao gazety moa raha nahita ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fanadiovana faobe nataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) tao Mananjara- Paraky boriborintany faha 4 dia nanararaotra nanontany ny heviny mikasika io resaky ny minisitra io. Tsotra ny navalin’i Dada mikasika izany , mbola hisy sahy hisambotra ahy ihany ve amin’izao andro izao, iza no hanadio eto raha ho samborina aho ? Namafisiny fa fitsaràna tsy mahefa tsy manaraka ny lalampanorenana no nitsara azy tamin’io, ary tsy nanatrika io fitsaràna io aho hoy izy tamin’izany ary mbola filohampirenena amperin’asa. Ankoatra izay, nazavain’ny filoha Marc Ravalomanana ny resaka mety ho fiarahamiasa eo aminy sy ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ; satria misy ihany ireo mamadi-dresaka milaza fa lasa mikaoty an’i Andry Rajoelina i Dada . Nanambara mazava ny filoha Marc Ravalomanana : n’iza n’iza rehefa Malagasy dia afaka miresaka foana, ary tsy maintsy atao izay hiaraha-miasa aminy raha manana tombontsoa iombonana ho an’ny vahoaka izy . Ny olona ve hoy i Dada tsy hanana ny fahalemeny sy fahadisoany fa rehefa mifanazava dia afaka mifanaraka tsara. Hatramin’izao aloha namafisin’ny filoha Marc Ravalomanana fa mbola tsy misy ny resaka fifanarahana teo aminy sy i Andry Rajoelina.
Rado NAMBININA	le 12 janvier 2018 à 10 h 54 min
Ny tody tsy misy fa ny natao no miverina : tsaroantsika ve ny nanagadrany an’i Tantely ANDRIANARIVO izay praiminisitra am-perin’asa ihany koa tamin’izay andro izay ?
Aina	le 12 janvier 2018 à 15 h 14 min
Tsaronay tsara mihintsy. Premier ministre mankatoa ny fitondrana tsy lanim-bahoaka, tarikin’ny mpanao fraude éléctorale tamin’izany fotoana. Rariny loatra raha nogadraina satria manao tsinotsinona ny safidim-bahoaka. Dada tsy vogadra izany na inona ho lazainao. Sa ankasitrahanao ihany koa izany ny acte criminel nataon’i Kolonely Kotiti tamin’izany andro izany? izay antony nanagadrana azy? Mandiniha tsara ianao.